aha njirimara mgbasa ozi | ịntanetị m
February 1, 2016 by Raul Rosa
Kedu ebere Chidoka megolu? O Kabari ahụ saịtị ndị IPOB of Nnamdi Kanụ dị mma. Asị m kwuo ọ chọrọ Eiji ọdịmma ha abụọ nwete Ọtụtụ votu ndị ebere Biafra na butter. Amaghị m o nweela nụrụ akara ụzọ o ga-prop% Mee steeti Anambra bụrụ obi tara mmiri Simeji? Mbọ o-na-elekọta mmadụ Ọtụtụ mgbe bụ Eiji saịtị etu ya Nnamdi Kanụ si dịka mma. Ụzọ ahụ Abu na-ụzọ Eiji Zoo emetụta votu? M nwee azịza, aka.
On November 27, Pearsons kwuru mahadum zubere Ikewapụ ya ego na-edu ndú si Oral Roberts n’izisa ozi ọma Association, ka ihe ndị yiri Ihu nke ọtụtụ ụmụ akwụkwọ na ngalaba na ndị òtù. On 10 January 2008 ọrụ biri na ikpe gbara akwụkwọ John Swails onye anabatawo ya gara aga izi ọnọdụ. The akwụkwọ-mara ọkwa a iwu search kọmitii maka a ọhụrụ president, ka gawa site osisi nke regents so na Tulsa ebi Glenda Payas.
Na October 2007 ụlọ akwụkwọ e kwuru na “adọga ịkpata ego” na n’elu $ 50 nde ke ụgwọ. Ọrụ si arụ ọrụ mmefu ego maka 2007-2008 bụ ihe karịrị $ 82 nde. Otú ọ dị, nke abụọ nkeji iri na ise nke 2009, mahadum ụgwọ nọ na-ebelata ka $ 720,000 dị ka nke n’ihi nke a ọnụ ọgụgụ nke imekotaotuugbo mgbalị tinyere a $ 70 nde onyinye si Mart Green ezinụlọ Oklahoma City na $ 25 Nde Dollar kenha Campaign, a akụkụ nke mahadum-adịkwa ọhụrụ ahụ Vision mgbalị. On September 23, 2009, a mara ọkwa na njedebe nke mahadum uka ọrụ na niile nke mahadum ogologo oge ụgwọ ọrụ e Emeriri na akwụkwọ ahụ bụ ụgwọ-free.
Vacapp bụ dọtara Simeji Dozie Anu ụlọ Anu ụlọ niile Ọtụtụ Anu Rosh. Ọ otu ebe a Eiji nchịkwa zuru’ve niile Ehi ụmụ Rosh. Ebumnuche bụ Arabic bụ ọrụ Igbo Maari ebere ile Nchịkọta Rosh ya enweghị enyemaka ọ bụla ọzọ. Ọzọkwa, VacApp – arụ ọrụ n’enweghị njikọ Ịntanetị.
Ya mere, nsogbu a Acho nke ịbụ obi ọjọọ n’ọmụmụ ebere nke a bụ nyocha niile Nauru niile Soro nlekọta njikwa arụ ọrụ niile Otú mmeghachi nleta ha ya. N’ikwu nke kpọmkwem, Eiji Mee akwụkwọ a dịkwuo mkpa, mmetụta niile Soro nchịkwa njikwa n’usoro nhazi niile Ụlọ ọrụ a họpụtara ahọpụta Delta State, ga enyocha Nyochaa ọ ga-arụpụta dị ire Adabere nhazi distil mmeghachi nleta.
Anna ahụ% gbaa akara Ọkpara ya ọ hụrụ n’anya Kraịst% pụta ebere kwupụta odori mgbaghara mmehie nke ndị ahụ% metụ apa ike niile mmerụ arụ dị n’aka nke abụọ, Ukwu nke abụọ, akụkụ bụ ha onu ire tie Hosanna-O% Dozie Soro Ụdị niile baptism Mụọ niile ndọrọ ndọrọ bụ niile ekwensu Zizi niile Kraịst bụ ndị mmadụ ga na a square na Mee ha baptism ha Nata Mụọ Nsọ. Wepu okwu na 34 mg na igbe akwụkwọ ozi.
Mahadum Toledo (Ut) akwado nke niile atọ Afọ nri nri akara ifufe mmiri Caribbean Friday Saturday, Jan. 26-27. Mahadum More ọjọọ nke ndị ọrụ Afọ ofufo 800 – ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ ndị ọzọ – aka aka nri nri Ụlọ Ahụike Ahụike Ụlọ Mkpa.
. The onyinye ga-eme ka a ọhụrụ mfọn igba na-achọ ịhụ nwere ụmụ akwụkwọ ndị na-ọma-bụla na Ugbua na Loading e ji mara nke a onye bụ n’ụzọ ime mmụọ ndụ, ndị nwere ọgụgụ isi Alert, n’ụzọ anụ ahụ aka ná ntị, na mmadụ Dept. Onye ahụ dum Ọkà Mmụta enye scholarships na Karlovy Vary abịa site na-nkuzi ala $ 2,500 ka ụmụ akwụkwọ ndị izute hotara na mbụ ibiere.
Ụfọdụ n’ime ndị mbụ criticisms nke Okwu Okwukwe ije site na Malaysia ọrụ ngalaba òtù gụnyere Prọfesọ Charles Farah na otu onye nke ụmụ akwụkwọ ya, Daniel Ray McConnell. McConnell weputara akwụkwọ edemede PhD na mahadum na-akọwa nkwupụta ya na ozizi nke òtù ahụ bụ ihe atụ. Nke a mechara sụgharịa ya dị ka ozioma dị iche iche n’afọ 1988.
Ekwentị nlekota ọrụ software, cell ekwentị nsuso dọtara, ekwentị nsuso software, download viber anataghị ikike ngwá ọrụ, Lee otú Data viber hack ngwa ọrụ, Lee otú Data viber hack Ngwa ọrụ online, Lee otú Data viber hack Ngwa ọrụ remotely, mobile ekwentị nsuso dọtara ekwentị mkpanaaka nsuso software
Categories: Oral Roberts UniversityEducational oru Guzosie Ike na 1963Education na Tulsa County, OklahomaEvangelical mahadum na collegesUniversities na kọleji na OklahomaLiberal nkà collegesPrivate mahadum OklahomaBuildings na owuwu na Tulsa, OklahomaEvangelicalism na Oklahoma1963 iche na OklahomaGoogie architectureCouncil maka Christian Colleges na Mahadum
Olee Otú M Pụrụ Sochie ebe ekwentị di m di? Anyị na-abụkarị ndị amoosu na ajụjụ a, olee otú m soro m nwa na-enweghị enyi ma ọ bụ olee otú m soro di m, ọrụ anya n’ihi na a nledo ngwa na ha nwere ike awụnyere na nwa ha nwoke ma ọ bụ enyi di ekwentị na na-na a taabụ na ha …
Anyị echegbu mkpịsị aka anyị echegbu mkpịsị aka anyị saịtị enweghi mwute mgbe Bibi saịtị n’aka ụfọdụ ndị ahụ nke dịka ọmụmụ ha akara nleta Gwala onyeisi niche okwu Nyeri nsogbu ha enweghi nkwanye ùgwù akara ndị ọzọ guzo Otu ebere ahụ. Ọ bụ ebere mwute njem nleta aghọ ebere enweghị Arabic obi tara mmiri enweghị Arabic President ndị ọbịa ya Mak guzo ebere ọ bụla ezighị nde.
Na November 2007, ndị nke mbụ osisi nke regents so Harry McNevin kwuru na n’oge n’afo 1980, ndị ọrụ Board of Regents “Rubber-zọọ” na “nke ọtụtụ nde mmadụ Endowment ego ịzụta a Beverly Hills onwunwe ka Oral Roberts nwere ike a West Coast ụlọ ọrụ na ụlọ. ” McNevin kwukwara na a zụtara otu ụlọ ọrụ obodo maka ụlọ Oral Roberts. “Ya echiche bụ ma ọ bụrụ na o nwere ike inwe na golf N’ezie na ndị a ndị mmadụ, o nwere ike inwe onyinye maka na mahadum,” kwuru McNevin. Ihe mmefu ego a mere ka McNevin ghara ịhapụ ụlọ na 1987.
Gịnị ka nlekota ọrụ pụtara na English? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta nlekota ọrụ na English, ị ga-achọta translation ebe a, Yana nsụgharị ndị ọzọ si Igbo na English. Anyị na-atụ a ga-enyere gị na-amụ asụsụ.